Site Network: Home | E4Myanmar | Motor Design | About
Welcome | E4Myanmar | Motor Design | Downloads | Photos | Tour | Merchandise | Interviews
သူငယ်ချင်းတို့ သိပြီးသားတွေ များမှာပါ။ နေ့စဉ်သုံးနေ၊ ကြုံနေရတာလေးတွေကို မှတ်စုလုပ်ထားတာပါ။ စံနစ်ဆိုတာက ဟောင်းသွားပြီးပြောင်းသွားရင် အရင်က ငါတို့ ဒီလို လုပ် ပြီး သုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေ ကျန်ခဲ့အောင်ပါ။ အသုံးဝင်မယ်ထင်လဲ စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်...
In this blog I am just mirroring the links and info found by googling the WEB.
who is ko in cbox?
3 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် at 04:05
တစ်ချို့ က သူ့ အဆင့်အတန်းကို cbox တွေမှာ လာလာပြကြတယ်ဆိုတာ ကြားဘူးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ပထမဆုံး ဒါမျိုးကြုံဘူးတာပါ။ အမှတ်တရပေါ့ဗျာ။ ဒါက သူ့ ip နဲ့ အချက်အလက်တွေပါ။ (165.115.24.10) 14 Mar 08 17:12။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိုင်ပီက ပရောက်ဆီ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က အဲဒီ အချိန်တစ်ဝိုက် ၀င်လာတာဆိုလို့ အောက်က3ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အချိန်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်ကဆိုတာသိသာပါတယ်။
14.03.08 16:44:13 Golden telecom Russian Federation xxx.xxx.xxx.xxx Firefox Windows XP
14.03.08 17:09:59 Myanma post and telecommunication Myanmar xxx.xxx.xxx.xxx Firefox Windows XP
14.03.08 21:53:48 Not available United States of America xxx.xxx.xxx.xxx Explorer 7.x Windows XP
6 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix at 06:21
ဖိုရမ်တစ်ခုကို ဖတ်ရင်း ဘာမှန်း၊ ညာမှန်း မသိဘဲ ဟက်ကာဖြစ်ချင်နေကြတဲ့ မြန်မာလူငယ်များကို သွားတွေ့ပါတယ်။ ဟက်ကာ တကယ်ဖြစ်ချင်ပါသလား။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံးမေးကြစေချင်ပါတယ်။ ဟက်ကာကို ဘယ်လိုအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုကြမှာလဲ။ သူများတွေပြောတဲ့ ဟက်ကာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘယ်လို ဟက်ကာအမျိုးအစား ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော့်ကို ဆရာကြီးလုပ်တယ်လို့ ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် စေတနာက ရိုးစင်းပါတယ်။ အမှားတေ၊ွ လမ်းပိတ်တွေ နဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လမ်းကို အကြိမ်ကြိမ်လျောက်ခဲ့ ပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နောက်လူတွေကို ကျွန်တော့်လို မဖြစ်စေချင်လို့ပါပဲ။ ဘယ်အရာပဲ လုပ်လုပ် ရည်မှန်းချက် ရှိရှိ၊ စံနစ်တကျ နဲ့ နည်းမှန်၊ လမ်းမှန် လုပ်စေချင်ပါတယ်။
ဘယ်ပညာရပ်မဆို အချိန်ပေးရပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဆယ်နှစ်လောက်ပေးတာတောင် ပညာရပ်တစ်ခုကို ပိုင်သွားပြီလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ရတဲ့ ပညာဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မခိုင်မြဲပါဘူး။
ဟက်ကာ တစ်ယောက်တစ်ယောက် တစ်ကယ် ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကွန်ပြူတာ ပညာရပ်တွေကို အခြေခံကနေ အကုန်စလေ့လာရပါမယ်။ ဟက်ကာ ဆိုတာ သာမာန် ယူဇာတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ သူဖြစ်ချင်တာကို သူကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ သူ့မှာရှိတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကြားကနေ ရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေပါ။ ဒီလိုမျိုး ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးလာလာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရဖို့ တစ်ပွဲတိုး နည်းလမ်းတွေကနေပြီး လုပ်မပေးနိုင်တာ အသေအချာပါ။ ပရိုဂရမ်းမင်း နဲ့ စစ်စတမ်ရဲ့ အခြေခံ အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုတောင်မှ သေချာ မသိသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖို့ဆိုရင် ပိုပြီး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဥပမာပြောရရင် သာမာန်ယူဇာတစ်ယောက်က စက်တစ်လုံးကို သုံးနိုင်တဲ့ အော်ပရေတာဆိုရင် ဟက်ကာ တစ်ယောက်က အဲဒီလိုစက်မျိုးအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး သိပြီး modify လုပ်နိုင် design အသစ် လုပ်နိုင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်နဲ့ တူပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက မိမိလေ့လာတဲ့ ပညာရပ်ကို မိမိနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အဖွဲ့ အစည်းမှာ အကျိုးပြုဖို့ ဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ မလေ့လာသင့်တဲ့ ပညာ မရှိပါဘူး။ အသုံးမချသင့်တဲ့ ပညာတော့ ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ပါဘူး။ အတွေးအခေါ်မှားမှာ ကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ လက်နက်တစ်ခု၊ စွမ်းအင်တစ်ခုဟာ အင်အားကြီးမားလာတာနဲ့ အမျှ သူ့ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ကလဲ ပိုမို အရေးကြီးလာပါတယ်။ အတတ်ပညာလေ့လာတဲ့ နေရာမှာ ဘာကြောင့် ဒီပညာကို လေ့လာတာလဲ၊ ဘယ်လို လေ့လာမလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးချမလဲ ဆိုတဲ့ အမြော်အမြင်နဲ့ ယှဉ်တဲ့ သုံးသပ်မှုမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
နောင်အားရင် တကယ့် ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုတဲ့ အခြေခံ ပညာရပ်တစ်ချို့ကို ပြောပြပါ့မယ်။ ဟက်ကာဖြစ်အောင်တော့ ဘယ်သူမှ မလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
[RS.com] Airport Tycoon3
1 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix at 22:37
Credit: Original post is here from warez-bb.org
RAR PASS : www.fulloyunindir.com
Tags: game, download
[RS.com] [MU.com]Warcraft3+ Frozen Throne + DOTA
0 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix at 21:48
Warcraft3bundled with frozen throne with DOTA MAPS !
3 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix at 03:40
Credit: original post is here from warez-bb.org this blog is to help people from myanmar who cannot login to warez-bb.org
Dino Crisis2is an action game and sequel to Dino Crisis. The game was developed and published by Capcom and was released for the PlayStation on September 13, 2000. The game was followed by another sequel, Dino Crisis3which was released in 2003 for the Xbox.
Download from Rapidshare.com (800mb, Password: softmanija.com)
Link checked on Thu Jan 31, 2008 7:38 pm [WBB_Linkchecker_Bot]
1 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် at 04:40
Autocad books collections from http://www.warez-bb.org
0 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix at 09:29
original post http://www.warez-bb.org/viewtopic.php?t=900519&highlight=
AutoCAD Secrets Every User Should Know [11.35MB]
Introducing Autocad 2008 [18.37MB]
AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible [14.56MB]
Mastering AutoCAD 2007 & AutoCAD_LT_2007 [33.25MB]
AutoCAD 2007 For Dummies [8.46MB]
Rar pass: www.insaatim.com
Labels: autocad, links, rapidshare
ဒီမှာ summary ရေးပါ။
Labels: links, rapidshare
Rapid share shared folder Links
0 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် - bluephoenix at 09:17
Labels: links, rs folders
justanice links
0 comments Posted by ဘလူးဖီးနစ် at 05:33
tutorial video များလုပ်ရန် camstudio ကို အခမဲ့ ရယူသုံးစွဲပါ
rs folders (1)
Uni code (1)
March (1) February (4) January (25) December (1)
Modified by ဘလူးဖီးနစ်
Copyright 2006 | Blogger Theta Template by ဘလူးဖီးနစ် | Design by ဘလူးဖီးနစ်